Safiirka UK ee Somalia oo waraysi ka bixiyey xaalada dalku marayo iyo booqashadii Somaliland | Goojacade
Home Somalia Safiirka UK ee Somalia oo waraysi ka bixiyey xaalada dalku marayo iyo...
Safiirka UK ee Somalia oo waraysi ka bixiyey xaalada dalku marayo iyo booqashadii Somaliland
Safiirka dalka Ingiriiska u qaabilsan Soomaaliya, Amb. Ben Fender ayaa waxa uu bixiyey wareysi gaar oo dhinacyo badan taabanaya, intii uu ku sugnaa Caasimada Somaliland.
Safiirka oo wareysi gaar ah siinayey Telefishanka HCTV, ayaa waxa uu kaga waramay arrimo kala duwan oo ay kamid yihiin Socdaalkiisa Somaliland, Khilaafka xisbiyada iyo weliba qabsoomida doorashooyinka Somaliland.
Fender ayaa sidoo kale waxa uu ka hadlay Wada-hadalada Somaliland iyo Somaliya, xaalada Muqdisho iyo Dagaalka Al-shabaab lagula jiro iyo arimo kale oo dhawr ah.
Wareysigaas oo dhamaystirana ayaa wuxuu u dhacay sidan:
J: Waxaanu ka mid nahay kuwa ugu weyn ee taageerada siiya Guddida Doorashooyinka Qaranka, Waan la kulmo shalay, waxay qabteen shaqo wanaagsan, waxay diyaariyeen doorashada Aqalka Hoose ee Baarlamaanku inay dhacdo, waxaan filayaa inay diyaar yihiin, oo ay dhaqaajiyaan hanaanka diiwaangalinta codbixiyeyaasha sida ugu dhakhsaha badan ee loo helo xeerka codbixinta, iyo sida ugu dhakhsaha badan ee ay u timaado heshiiska xisbiyada siyaasadu. Sidoo kale arinta aan hoosta ka xariiqayaa waxa weeyaan in la sameeyo oo la meelmariyo xeerkaasi oo ogaalada in doorashadu qabsoonto.
J: Waxa cad, wadahadalo iyo wadaxaajood kasta oo u dhexeeya Hargeysa iyo Muqdisho ama Hargeysa iyo Garoowe, uu yahay mid aan dawladahaasi mahadin, balse waxaan u sheegayaa siyaasiyiinta dhamaantood waxa weeyi, in si aad ah aynu gacan uga gaysano xidhiidh dhab ah oo kalsoonida lagu dhiso, waxaana arinta muhiimka ah in qof walba uu ogaadoay tahay, hadii ay talaabadaasi qaadaan, waxay heli doonaan taageero buuxda oo ay ka helaan bulshada caalamka, waxaanan hubaa in arintaasi iman doonto.
Doorka Britaina waxa weeye in la horumariyo ciidamada Qalabka sida ee Somalia iyo Bileyska, waxaanu Askarta Soomaalida ah ku tababarnaa Baydhabo, waxaanu maalgalinaa horumarinta Booliska anaga oo maalgalinay dhawr kun oo saraakiil booliska ka tirsan, waxaanan rumaysanahay in tani ay tahay bilawga taageerada Somalia oo hesha ciidan xirfad leh oo si fiican u tababaran.
Waxaan aaminsanahay in tani ay noqon doonto ta isbadal ku keenta Al-shabaab, waxaana bilaabmay ifafaalaha arintaasi.
Previous articleXiisada Mareykanka iyo Iran oo ka sii daraysa
Next articleCiidamada xoogga Somalia oo burburiyey saldhig ay lahaayeen Al-Shabaab